Dowlada KMG oo isku furaysa goboladda Koofureed ee dalka
Jul 16, 2012 - jawaab	Number of View: 353Share
C/Qaadir Maxamed Nuur Siidii Guddoomiyaha Gobalka Shabeelaha Hoose ee dowladda Soomaaliya oo la hadlay Saxaafadda ayaa sheegay in dhawaan ay isku xiri doonaan Gobalka Shabeelaha Hoose iyo sidoo kale Gobalka Baay.
Wuxuu sheegay in howsha ugu weyn ay hada qaban doonaan ay tahay inay isku xiraan wadada xiriirisa Afgooye iyo sidoo kale Magaalada Baydhabo,isaga oo intaa raaciyay in hada la diyaariyay ciidamadii wadadaasi ku dhaqaaqi lahaa sida uu hadalka ku sheegay.
Guddoomiyaha Gobalka Shabeelaha Hoose ee dowladda Soomaaliya C/Qaadir Maxamed Nuur Siidii ayaa tilmaamay inaan warbaahinta laga shaacinayn waqtiga ay ciidankaasi dhaqaaqayaan,isaga oo taasi ku tilmaamay arrin Milateri.
C/Qaadir Maxamed Nuur Siidii ayaa sidoo kale ka hadlay dhanka Bini,aadinimada Gobalka Shabeelaha Hoose waxaana uu sheegay in dhawaan Gobalka ay imaan doonaan Hay’addo gargaar sida uu sheegay caawin doono dadka Gobalkaasi.
Masuuliyiinta dowladda ee Gobalka Shabeelaha Hoose ayaa dhowr jeer ku celceliyay in deeganada iyo degmooyinka kale ee Gobalkaasi ay ka saari doonaan Ururka Al-Shabaab inkastoo dhawaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo is garabsanaya ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Laanta Buuro halkaasi oo ay ku sugnaan jireen Ururka Al-Shabaab.